Ọrụ ụlọ otu na -apụ, ndụ abụghị naanị ọrụ, kamakwa abụ na ịdị anya. A na -enwe otu ahụ na mkpụrụ obi mgbe niile n'ụzọ. Iji kwụghachi ọrụ dị mma na ịrụsi ọrụ ike nke ndị ọrụ Aili na iwusi ịdị n'otu nke ụlọ ọrụ ahụ ike, Aili haziri nke ọma njem a ụbọchị 6 na abalị 5 na Great Northwest. Ọdọ Mmiri Iron na Osimiri Yellow, Ọdọ Mmiri Qinghai na Xining, Oke Ọwụwa Anyanwụ na Dunhuang, na Mogao Grottoes na -enye ndị mmekọ Aili ohere izu ike ma nwee ekele maka ndụ mgbe ha na -enwe ihe nketa akụkọ ihe mere eme nke China, ịdị ebube na ịdị ebube nke okike, na mmụọ nke ndụ, chịkọta ike otu, ma kwalite echiche nke ibu ọrụ na ọrụ nke ndị ọrụ. Mmetụta nke ịbụ onye, ​​na -egosi omume pụrụ iche nke Aili.
Nkwụsị mbụ: Yellow River Iron Bridge, Lanzhou, ógbè Gansu
Baitashan Yellow River Iron Bridge wuru na 1907 afọ, nke bụ àkwà mmiri mbụ nke HuangHe. Àkwà mmiri ahụ karịrị mita 230 n'ogologo na ihe karịrị mita 7 n'obosara, ya na ihe ndị yiri ya bụ beret steel truss dị ka akwa akwa, okwute okwute na ikpo okwu okwute, ngụkọta nke oghere 5.
Nkwụsị nke abụọ: Ọdọ Qinghai na obodo Xining
Ọdọ mmiri Qinghai bụ ọdọ mmiri kachasị n'ime na ọdọ mmiri nnu kacha ukwuu na China. Ọ buru ibu ma dịkwa aghụghọ, dị ebube, bụ nnukwu enyo nke okike na Qinghai Plateau.
Nkwụsị nke atọ: Mmiri Dunhuang Crescent Spring
Mmiri Yueya bụ otu n'ime ala okike pụtara ìhè na Dunhuang. A maara ya dị ka "ihe ịtụnanya n'ọzara" kemgbe afọ niile, a makwaara ya dị ka "otu n'ime ebe mara mma karịa nnukwu mgbidi". A na-ejikọ mmiri mmiri Yueya, Grottoes mogao dị okpukpu itoolu na nka nka nke Mogao Grottoes, nke bụ "ọrụ ebube atọ" na ndịda obodo Dunhuang.
Nke anọ: Mogao Grottoes na Dunhuang
A na-akpọkarị Mogao Crottoes dị ka Ọgba puku-Buddha, dị na Dunhuang na nsọtụ ọdịda anyanwụ nke hexi Corridor. E wuru ya n'oge Fu Jian, eze ukwu Xuanzhao nke usoro ndị eze Qin mbụ, na -enwe nnukwu nha nwere oghere 735, frescoes square 45,000 na ihe osise ụrọ 2,415. Ọ bụ saịtị nka Buddha kacha ibu na nke kacha baa ọgaranya n'ụwa.